Filisxeem miseensa Manamurtii Yakka Idiladdunyaa (ICC) ta’uuf iyyannoo galfatte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Filisxeem miseensa Manamurtii Yakka Idiladdunyaa (ICC) ta’uuf iyyannoo galfatte
Filisxeem miseensa Manamurtii Yakka Idiladdunyaa (ICC) ta’uuf iyyannoo galfatte
Filisxeem iyyannoo miseensa Manamurtii Yakka Idiladdunyaa isii taasisu mootummoota gamtoomanitti galfatte. Iyyannoo kana kan galchan ambaasaadara Filisxeem Motummoota Gamtaa’anitti ob. Riyaad Mansuuriidha. Iyyannoon kuni fudhatame Filisxeem miseensa Manamurtii Yakka Idiladdunyaa taate taanaan, himannaa yakka woraanaa Israa’el irratti banuuf deemti jedhama. Miseensummaan mana murtii kanaas adeemsa quphachiisuu Israa’el ummata yahuudaa dachii Filisxeem irratti geggeesitus afoo dhaabachuuf isii kan gargaaru ta’uudha kan himamaaru.
Perezidaantiin Filisxeem Mahmuud Abbaas seensa woggaa harawaa kana irratti iyyannoo Mootummoota gamtoomanitti ergame kana kan mallatteesse.
Iyyannoon kuni fudhatamee Filisxeem miseensummaa argatte tanaan, Mannimurtii Yakka Idiladdunyaa yakka dachii Filisxeem irratti Israa’eliin raawwatame qorachuu danda’a. Waa’ee barbaachisummaa miseensa ICC ta’uu kana Mansuur yoo gabaastotatti dubbatu, ‘ kuni tankaarfii baay’ee barbaachisaa ta’eedha. Filannoo nuti kanniin harka Israa’elitti dachii Filisxeemi irratti dhumaniif haqa barbaaduuf hordofaa jirruudha’ jedhe.
Iyyannoo kana qabattee Filisxeem gara Mootummoota Gamtoomaniitti qajeeluun isii Ameerikaafi Israa’eliin aarseera. Miseensonni paarlaamaa Ameerikaa tokko tokkos Filisxeem daandii kana irratti bobba’uun kan isaan rifachiise ta’uu ibsanii, gargaarsi Filisxeem Ameerikaa irraa argataa turtes balaa irra bu’uu kan malu ta’uu akeekkachiisaniiru. Sodaachisaan Ameerikaa kuni dhugaa ta’a taanaan Filisxeen Doolaara Ameerikaa kuma 400 bifa gargaarsaan woggatti argattu dhabdi. Sodaachisa gargaarsa dhaabuu kana irratti sagalee isaanii olqabatanii kan dhageessisaa jiran heduun isaanii miseensota partii Ripabilikaaniiti.
Mootummoonni Gamtoomanii iyyannoo 16, isa miseensummaa ICC gaafatus dabalatee, miseensa mallattoolee ykn wolii galtee biyyoonni addunyaa heddu mallatteessan mallateessuu Filisxeemiin dandeessisu galfachuu isii ibse. Iyyannoon Filisxeem kuni ragga’uun duratti gadi fageenyaan kan ilaallamuu qaba. Dhumni iyyannoo kanaa beekamuuf yoo xiqqaate baatii lamaa eeguun dirqama, akka ibsa Mootummoota Gamtoomaniitti.
Akka angawaa Israa’el maqaan isaa akka tuqamu hinbarbaanne tokkotti, Israa’el adeemsa Filisxeem kana afoo dhaabachuuf fedhii kan qabdu ta’uu ibseera. Akka angawaa kanaatti Israa’el ykn lammiiwwan isii angawoota Filisxeem mana murtii Ameerikaatti dhihessuu irratti yaadaa jirti. Kunis himannaa lammiiwwan Israa’el hedduun rukuttaa hidhattoota Filisxeemiin lubbuufi qaama isaanii kan dhaban himannaa jedhuun.
Miseensummaan Filisxeem kuni mirkanaaye taanaan Manni Murtii Yakka Idiladdunyaa miseensota/biyyoota 123 ufkeessaa qaba jechuudha.
mana murtii yakka addunyaa
Previous articleBaqattoonni Itoophiyaa 16 Zaambiyaa keessatti too’annaa jala oolan
Next articleGareen Bokoo Haraam ijoollee 40 ukkaamse fudhate